Indlu yoMthi-iNdawo yokuKhusela eHlathini - I-Airbnb
Indlu yoMthi-iNdawo yokuKhusela eHlathini
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTibério
Amava okuhlala kwindlu ephezulu kumthi weMaçaranduba onenkulungwane ubudala awanakuchazwa! Sinikezela ngendawo yokuhlala engenye kwaye epholileyo kwenye yezona ndawo ziphakamileyo eMantiqueira. Indalo esentabeni idlamkile! Isandi somoya, ukuntyiloza kweentaka kunye nokungxola kwemithi kubumba i-symphony. Sicinga ukuba indawo ehlala umntu ngamnye iphazamisana nobukho bakhe. Ngoko ke, sinikezela ngendawo ebonelela ngamava angcono kwiindwendwe.
Sifakwe kwindalo egciniweyo apho kulula ukucinga ngezilwanyana zasendle ezizondla ngokusondeleyo, iintaka ziphumla ngokukhululekile kumasebe asecaleni kwefestile, i-treetops ngendlela ye-surreal (inkcukacha: kukho i-centenary treetop ngaphakathi kwegumbi), kunye nombono onomtsalane weentaba kumda ongapheliyo kumacala amaninzi.
Apha kunokwenzeka ukusela amanzi ompompo ngaphandle kokukhathazeka, sinyamekela kakuhle umthombo wethu kunye nentwasahlobo.
Iindawo zokuhlala ngaphakathi kwindlu yomthi ziyilelwe ukuze ziphumle okanye zihlaziye ngokukhululeka kunye nokulula. Sibonelela ngekhitshi elicocekileyo, ibhedi kunye nezixhobo zokuhlambela, izixhobo zomculo (isiginci, ukulele) neenkuni.
Kithina, iinkcukacha zibalulekile... Fumana amaxesha akhethekileyo ebomini bakho!!
Simi encotsheni yeeNtaba zeSerra da Mantiqueira ezikwi-1450m ukuphakama. Sihlala kwindawo ezolileyo apho ubomi buya busiba khaphukhaphu kwaye bubonakala buyacotha. Iintaba ezimangalisayo zesixeko zibonelela ngemeko-bume egqibeleleyo kwabo baqhelisela imidlalo efana nokuhamba, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukubhabha simahla (Paraglider), ukunyuka, phakathi kwezinye ezininzi. Sijikelezwe ziincopho, iingxangxasi, iindlela ezininzi kwaye, ngokuqinisekileyo, okwaziwayo kunye nokutya okunencasa okuvela eMinas Gerais. Ukucinga ngobu buhle kuyonwabisa!!
Umbuki zindwendwe ngu- Tibério
Eyona nto imangalisayo ngobomi kukwabelana ngamava nolwazi. Siyathanda ukunxibelelana neendwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Córrego do Bom Jesus